•Sicela ukufunsiwa ubaba ka Ayanda noSiphosethu Sibisi abazalwa uHlengiwe Sibisi wase-France ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintanen nosonhlalakahle uMrs Dlamini enombolweni ethi : 033 392 8619.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaMsimango Fortune Bandile ongaziwa. Umama wakhe uNosnindiso Hella onmgasekho emhlabeni obehlala eZondi Store. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uMemela enombolweni ethi : 033 505 50084.
•Sicela ukufuniswa umama kaKwanele Mbanjwa onguBusisiswe MBANJWA . Onolwazi s icela athintane nosonhlalakahle Un.Mchunu enombolweni ethi : 033 392 8600. Sicela ukufuniswa ubaba kaThaembalakhe Phoswa umama wakhe kunguNomusa Phoswa ongasekho emhlabeni. Igama likababa uMsongelwa Madlala. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uVilakazi enombolweni ethi : 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa abazali baNoluthando Hadebe abangaziwa ukuthibakuphi. Igama likamama u-Amanda Hadebe kanti ubaba uSihle Bhengu . Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-S.D Vilakazi enombolweni ethi : 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaSyamthanda Mandisa Shezi waKwaSongonzima ngasehholo kaNtombela. Igama likamama wakhe uSthabile Shezi ongasekho. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle P.Zungu enombolweni ethi : 033 505 0084.
•I Child and Family Welfare icela ukufuniswa abazali baka Siphesihle Jaca. Umama u Nontuthuko Jaca kanti ubaba u Sthembiso Zondi. Kucelwa bathinte U Thembi Zondi KU 033 342 8971.
•I Child Welfare icela ukufuniswa ubaba ka Lusanda Pink Mosira, ozalwa u Reanetse Mosira, ongasekho emhlabeni. Onolwazi kucelwa athintane no Sozonhlalakahle u Nobuhle Madlala enombolweni ethi : 033 342 8971.
•I Child Welfare icela ukufuniswa abazali baka Enzokuhle Mkhize, umama wakhe okungu Mhlongo Nombuso, kanti ubaba wakhe onagaziwa. Onolwazi kucelwa athintane no Nobuhle Madlala enombolweni ethi : 033 342 8971.
•I Child Welfare icela ukufuniswa ubaba ka Aphile Angel Nene, umama wakhe kwakungu Philile Londiwe Nene ongasekho emhlabeni. Onolwazi kucelwa athintane no Nobuhle Madlala enombolweni ethi : 033 342 8971.
•PMB Child and Family Welfare is trying to locate the biological father of Thazkia Mahomed, her mother was Zahida Mahomed, she died in 2016. Anyone with the information please contact the Social Nobuhle Madlala on 033 342 8971
•Sicela ukufuniswa uBaba ka Siyamuthanda Amed Nzuza ohlala noGogo wakhe eFrance. UBaba wakhe wayekade emuthole noThembelihle Priscilla Nzuza ongasekho emhlabeni. Uma kukhona onolwazi sicela afonele uSocial Work uMs Nqubane kule number yocingo ethi 0333928600.
•Besicela ukufuniswa uBaba ka Onele Manci owamushiya e White Cross Disabled Hope Centre ngemuva kokushona kuka Mama wakhe uNoluthando Manci ngo 2013. Onolwazi sicela atinte uSocial worker uNellie Nqubane kwaMbilakahlela nakule number 0333928600
•Besicela ukufuniswa uBaba ka Onele Manci okade emushiye eDisability home ese Portshepstone ngo 2013 emuva kokushona kuka Mama wakhe uNoluthando Manci. Sicela onolwazi afonele u Social Worker N N Nqubane ku 033 3982600.
•I-child and Family Welfare icela ukufuniswa abazali ba-Amahle Celiwe Zikhali. Umama wakhe uMabongi Ndlovu kanti ubaba uMfanufikile Robert Zikhali. Onolwazi sicela athintane noNduduzo Sithole enombolweni ethi : 033 342 8971.